Pôrtô Rikô: Kolikoly Mameno Ny Departemantan’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2017 2:09 GMT
Vakio amin'ny teny 한국어, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana:lahatsoratra nivoaka ny Oktobra 2010)
Ny 6 Oktobra, nisambotra olona 133 tao Pôrtô Rikô ny Birao Federaly mpanao Fanadihadiana (FBI), ka polisy ny 89 tamin'ireo, tao anatin'ilay antsoin'ny Departemantan'ny Fitsaràna Amerikana hoe “ny fanadihadiana goavana indrindra tamin'ny resaka kolikolin'ny polisy teo amin'ny tantaran'ny FBI”. Nampangaina ho miaro ireo mpivarotra zavamahadomelina ao an-toerana ireo polisy. Tena felaka henjana ho an'ny laza efa ratsy ananan'ny departemantan'ny polisy ao Pôrtô Rikô io, taorian'ireo raharaha malaza be momba ny herisetran'ny polisy tato anatin'ny volana vitsivitsy. Manontany tena ireo Pôrtôrikàna momba ny fomba sy ny antony nampikororosy ny zavatra rehetra toy izao.
Mampitandrina i Profersora Gary Gutiérrez, mpampianatra ny fitsaràna heloka bevava, ao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny gazetiboky dizitaly an-tserasera 80 Grados [ES] momba ny tsy hitokisan'ny olona intsony ny fahefan'ny polisy aorian'ireny fisamborana ireny :
Mety hampididoza ny tsy fitokisana intsony ny manampahefana amin'ny filaminambahoaka, na voamarina na tsia, satria miafara amin'ny fikotrehana tangolika herisetra ireny. Raha toa ireo andrim-panjakana ato anatin'ny firenena, toy ny polisy, no hita ho tsy itokisana, tsy hanaiky hanaraka ny lazain'ny manampahefany ny olompirenena.
Manainga ireo mpamakiny i Gutiérrez mba handinika ity olan'ny kolikolin'ny polisy ity, tsy ho toy ny zavamisy ivelan'ny fiarahamonina, fa amin'ny maha-vokatra nateraky ny fiarahamonina “consumériste” iray (fiarahamonina mpanjifa misy fikambanana afaka miaro azy manoloana ny fahefam-panjakàna ) :
Ireny dia vokatry ny fiarahamonina iray manana kolontsaina mifototra amin'ny fanangonana ireo vokatra fanjifa, izay lasa endrika amantarana ny fahombiazana. Ity dia fiarahamonina iray izay tsy ao anatin'ny fahafahany mamokatra, manampy ary manana firaisankina miaraka amin'ny rehetra no misy ny soatoavin'ny tsirairay.
Ao anatin'ny andiany faha-29 tamin'ny 10 Oktobra, noresahan'ny tariky ny podcast #EnProfundo[ES] ihany koa ny mety ho antony miteraka ny fielezan'ny kolikoly tahàka izany ao amin'ny polisy. Vahiny manokana tamin'izany ny mpampiasa Twitter @Martillo20lbs, manamboninahitry ny polisy miaramila, ary niteny ny heviny momba ny antony mahatonga ny polisy hirona be amin'ny fanaovana kolikoly sy ny fampiasàna hery tsy misy dikany/tsy misy ilàna azy.
Notsindrian'i @Martillo20lbs fa iray amin'ireo antony fototra miteraka izany ny fampanantenan'ireo politisiana hampitombo ny isan'ny polisy manamboninahitra, nandritry ny fampielezankevitra nataon'izy ireo. Niteraka fomba fanao goragora sy mampididoza tao amin'ny departemantan'ny polisy izany, izay niharan'ny tsindry mba handray na iza na iza polisy tsy tena izy naroson'ireo politisiana:
…afaka amin'izay fitsirihana voalohany izay ianao, ary avy amin'izay fomba fijery izay, ny tsy maintsy ataonao dia ny mandeha any amin'ny toerana fianaran'ny polisy ary maka maripahaizana. Izay ilay izy. Izay no olana fototra eto Pôrtô Rikô: tsy misy fitsirihana madio atao amin'ireo mpifaninana…
Amafisin'i @Martillo20lbs fa io tsy fisian'ny fitsirihana io, atambatra amin'ny tsy fisian'ny fanofanana sahaza, dia miteraka kolontsaina iray anjakan'ny kolikoly:
…tsy manana kolontsaina iray misy soatoavina efa voapetraka ho arahany ny polisin'i Pôrtô Rikô, soatoavina izay tokony ho ny fiarovana ny olona sy ny tombontsoam-bahoaka eto Pôrtô Rikô. Ny polisy izay tonga ao amin'izao fotoana izao ao anatin'ny polisy Pôrtôrikàna dia satria, na izy tsy manana vola, na izy tonga avy amin'ireo tetikasa sy nalefan'ireo mpivarotra rongony ho ao anatin'ny departemantan'ny polisy mba ho rehefa tafavoaka avy ao [amin'ny akademia] izy, hangataka famindran-toerana hiverina any amin'ireo tetikasa sy hanohy hanao izay zavatra efa nahazatra azy.
Toa an'i Gutiérrez ihany, milaza i @Martillo20lbs fa ny fampivoarana fahatongavantsina sosialy no ivon'ny fanovàna ny kolontsain'ny kolikoly.
…diso izy, na iza na iza hiditra ho polisin'i Pôrtô Rikô mba hahazoana vola, satria mpiasam-bahoaka izy. Mila manana ny fatranà fanolorantena ilaina hiadiana amin'ny heloka bevava ianao.
Miaraka amin'ny olan'ny kolikoly izay mifamatotra amin'ilay aretina mamàka lalina ao anaty fiarahamonina, toa mbola ho lavitra ezaka ny làlan-kizoran'ny polisin'i Pôrtô Rikô mba hamerenana indray ny lazany.